Fahamka Cinwaan Baarista, Jaangoynta, iyo Xaqiijinta Bixinta APIs | Martech Zone
Fahamka Cinwaan Baarista, Jaangoynta, iyo Xaqiijinta Bixinta API-yada
Jimco, Juun 26, 2020 Isniin, November 2, 2020 Douglas Karr
Kahor shaqada internetka, waxaan ka shaqeynayey toban sano wargeysyada iyo warshadaha tooska loo diro. Sababtoo ah dirista ama gudbinta isgaarsiinta suuq geynta jirka ayaa aad qaali u aheyd, waxaan aad uga taxaddarnay nadaafadda xogta. Waxaan rabnay guri kasta hal gabal, marnaba intaas ka badan. Haddii aan geyn farabadan isla isla waraaqaha tooska ah cinwaanka, waxay keentay arrimo badan:
Macaamiil jahwareersan oo ka bixi lahaa dhammaan isgaarsiinta suuqgeynta.
Kharash dheeri ah oo boostada ah ama dirid ah oo ay weheliso kharashka daabacaadda ee dheeraadka ah.
Caadi ahaan, waxay nooga baahatay inaan soo celino xayeysiiyaha markay keensadeen alaabooyin nuqul ah.
Intaa waxaa sii dheer, cinwaanada aan dhammeystirnayn ama khaldan ee loo baahan yahay soo celinta iyo kharashyada dirista aan loo baahnayn sidoo kale
Qiyaastii 20% cinwaanada lagu qoro khadka tooska ah waxaa ku jira khaladaad - qaladaad higaad ah, lambarro guryo qaldan, lambarro khaldan oo boostada ah, khaladaad qaabeyn ah oo aan u hoggaansamin qawaaniinta boosta ee waddanka. Tani waxay ka dhalan kartaa shixnado soo daaho ama aan la sii deyn karin, walaac weyn oo qaali ah oo loo qabo shirkadaha ka ganacsanaya gudaha iyo xuduudaha.
Cinwaanka xaqiijinta ma fududa sida ay u muuqan karto, in kastoo. Marka laga soo tago arrimaha higaadda, toddobaad kasta waxaa jira cinwaano cusub oo lagu soo kordhiyay keydka xogta qaranka ee cinwaanada la geyn karo dalka. Waxa kale oo jira cinwaanno loo beddelay, sida dhismayaasha isku beddeleen ganacsi iyo degsiimo, ama qoys keligiis ah oo loo dego guryo badan oo qoysas ah, dhul-beereedka ayaa loo qaybiyay xaafado, ama xaafadaha oo dhan ayaa dib loo horumarinayaa.
Nidaamka Hubinta Cinwaanka
Cinwaanka waa la cabiray - sidaas darteed lambarka guriga, cinwaanka, soo gaabin, higgaad qalad ah, iwm ayaa si macquul ah loo kala saaray.
Cinwaanka waa la jaangooyay - mar la falanqeeyo, cinwaanka ayaa markaa dib loogu qaabeeyaa heer. Tani waa mid muhiim ah maxaa yeelay 123 Main St. iyo 123 Main Street ka dib ayaa loo jaangooyn doonaa 123 Main St nuqulna waa la is waafajin karaa waana laga saari karaa.
Cinwaanka waa la ansaxiyay - cinwaanka la jaangooyay ayaa markaa lala jaan qaadayaa kaydinta xogta qaranka si loo arko inay dhab ahaan jirto.
Cinwaanka waa la xaqiijiyay - cinwaanada oo dhami ma aha kuwo la bixin karo inkastoo ay jiraan. Tani waa hal arrin oo adeegyada sida Khariidadaha Google ay leeyihiin… waxay ku siinayaan cinwaan sax ah laakiin xitaa waxaa laga yaabaa in xitaa uusan jirin qaab dhismeed halkaas lagu geeyo
Waa maxay xaqiijinta cinwaanku?
Xaqiijinta cinwaanka (sidoo kale loo yaqaan xaqiijinta cinwaanka) waa geedi socod xaqiijinaya cinwaanada jidadka iyo boostada inay jiraan. Cinwaan waxaa lagu xaqiijin karaa laba dariiqo midkood: hore, marka isticmaale uu raadsado cinwaan aan sax ahayn ama dhammaystirnayn, ama nadiifinta, baaritaanka, iswaafajinta iyo qaabeynta xogta ku jirta keydka xogta ka soo horjeedda xogta boostada.
Waa maxay xaqiijinta cinwaanku? Faa'iidooyinka iyo kiisaska isticmaalka ayaa la sharaxay
Xaqiijinta Cinwaanka iyo Caddaynta Cinwaanka (Qeexitaanka ISO9001)
Dhammaan adeegyada cinwaanku isku mid ma aha, in kastoo. Qaar badan oo ka mid ah adeegyada xaqiijinta cinwaanku waxay u adeegsan doonaan habab xeerarka u dhigma keydka xogta. Si kale haddii loo dhigo, adeeg ayaa laga yaabaa inuu caddeeyo inta u dhexeysa zip 98765 inay jirto Main Street waxayna ka bilaabantaa cinwaanka 1 waxayna ku egtahay 150. Natiijo ahaan, 123 Main St waa a ansax ah guriga ku saleysan caqliga, laakiin daruuri maahan a xaqiijiyay cinwaanka meesha wax loo geyn karo.
Tani sidoo kale waa arrin la xiriirta adeegyo bixiya latitude iyo longitude cinwaan gaar ah. Qaar badan oo ka mid ah nidaamyadan waxay u adeegsadaan xisaabta si macquul ah ugu kala jaraan cinwaanno baloog isla markaana soo celiyaan loolka iyo dhigga xisaabeed. Maaddaama tafaariiqleyda, maqaayadaha, iyo adeegyada dirista ay u isticmaalaan lat / dheer gaarsiinta jirka, taas oo sababi karta tanno arrimo ah. Darawal ayaa laga yaabaa inuu kalabar ka hooseeyo guriga oo uusan awoodin inuu ku helo iyadoo lagu saleynayo xogta qiyaas ahaan.
Qabashada Xogta Cinwaanka
Waxaan la shaqeynayaa adeeg gaarsiin hadda halkaasoo macaamiisha ay ku qorayaan cinwaankooda cinwaankooda, shirkaddu waxay u dhoofisaa alaab maalinle ah, ka dibna waxay u martaa iyaga oo adeegsanaya adeeg kale. Maalin kasta, waxaa jira daraasiin cinwaanno aan la soo gudbin karin ah oo ay tahay in lagu saxo nidaamka. Tani waa waqti lumis iyadoo la helayo nidaamyo maareyn kara tan.
Maaddaama aan hagaajineyno nidaamka, waxaan ka shaqeyneynaa inaan jaangoyno oo aan xaqiijinno cinwaanka markii la soo galo. Taasi waa sida ugu fiican ee lagu hubiyo nadaafadda xogtaada. U soo bandhig cinwaanka saxda ah, ee la xaqiijiyey gaarsiinta macaamiisha meesha laga soo galayo oo ha ka ogolaadaan inay sax tahay.
Waxaa jira dhowr jaangooyooyin oo aad ubaahantahay inaad aragto in goobaha ay adeegsadaan:
Shahaadada CASS (Mareykanka) - Nidaamka Taageerada Xaqiijinta Koodhka (CASS) wuxuu u saamaxayaa Adeegga Boostada Mareykanka (USPS) inay qiimeyso saxnaanta barnaamijka saxitaanka iyo iswaafajinta cinwaanada waddooyinka. Shahaadada CASS waxaa la siiyaa dhammaan boostayaasha, xafiisyada adeegga, iyo iibiyeyaasha softiweer ee jeclaan lahaa USPS inay qiimeeyaan tayada barnaamijyadooda cinwaannada la jaanqaadka ah ayna hagaajiyaan saxnaanta ZIP + 4, marinka gudbiyaha, iyo lambar shan lambar ah.
Shahaadada SERP (Kanada) - Barnaamijka Qiimeynta iyo Aqoonsiga Barnaamijka waa shahaado boosto oo ay soo saartay Canada Post. Ujeeddadeedu waa in la qiimeeyo awoodda barnaamijyada qaarkood ay ku ansaxiyaan oo ku saxaan cinwaanada boostada.
Cinwaanka Xaqiijinta APIs
Sidii aan kor ku soo sheegay, dhammaan adeegyada xaqiijinta cinwaanka looma abuurin si siman - markaa waxaad u baahan doontaa inaad dhab ahaan isha ku hayso wixii arrimo ah ee soo bixi kara. Kaydinta xoogaa dinaar ah oo lacag la'aan ah ama adeeg raqiis ah waxay kugu sababi kartaa lacag doolar ah arrimaha gaarsiinta gunta.
Melissa ayaa hada bixinaysa adeegyada xaqiijinta cinwaanka bilaashka ah muddo lix bilood ah (illaa 100K diiwaanka bishiiba) si loogu qalmo ururrada lagama maarmaanka ah ee ka shaqeeya taageerada bulshada inta lagu jiro COVID-19 safka faafa.
Melissa COVID-19 Deeqaha Adeegga
Halkan waxaa ah API-yada caanka ah ee loogu talagalay xaqiijinta cinwaanka. Waxaad ogaan doontaa in hal madal oo caan ah aan la xusin - Khariidadaha Google API. Taasi waa sababta oo ah maahan adeeg xaqiijinta cinwaanka, waa a geocoding adeeg. In kasta oo ay jaangoynayso oo soo celinayso latitude iyo Longitude, macnaheedu maahan in jawaabtu ay tahay cinwaan la soo gaarsiin karo.
Easypost - Xaqiijinta cinwaanka Mareykanka iyo xaqiijinta cinwaanka caalamiga ah ee si dhakhso leh u koraya.
Experian - wax ka qabashada xaqiijinta in ka badan 240 dal iyo dhulal adduunka oo dhan ah.
ammaantaada - Xogta laga helay in ka badan 240 waddan oo adduunka ah, Lob wuxuu xaqiijinayaa cinwaannada gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
gal - wax ka qabashada xalka xaqiijinta ee soo qaban doona, falanqayn doona, jaangoyn doona, xaqiijin doona, nadiifin doona, isla markaana qaabeyn doona cinwaanka cinwaanka in ka badan 245 waddan iyo dhulal.
Melissa - wuxuu cadeynayaa cinwaanada 240+ dal iyo territori barta laga soo galo iyo dufcadda si loo hubiyo in kaliya biillada ansaxinta iyo cinwaannada dhoofinta la qabtay oo loo adeegsaday nidaamyadaada.
SmartSoft DQ - waxay bixisaa badeecado keli keli ah, cinwaanada ansixinta API-yada iyo aaladda xirmooyinka oo si fudud ula qabsan doona barnaamijyadaada hadda jira ee cinwaanada ku tiirsan.
SmartyStreets - Waxay leedahay cinwaanka wadada US API, Zip Code API, Autocomplete API, iyo qalab kale oo lagu dhexgalo barnaamijyadaada.
TomTom - Muuqaalka codsiga geokoding-ka TomTom Online Search wuxuu bixiyaa xalka si fudud loo isticmaalo ee nadiifinta xogta cinwaanka iyo dhisida keydka macluumaadka ee goobaha geocoded.
Tags: cinwaanka apixogta cinwaankacinwaanka geocodingcinwaanka parswax ka qabashada jaangooyooyinkaxaqiijinta cinwaankaxaqiijinta cinwaankafududisoxnumxlobloqateXogta Melissasmartsoft dqtomtom
Sida Loo Dejiyo Faan Caan Ah Oo 5-Tallaabo Ah Oo Macaamiil Ah
5-ta Weerar ee ugu Weyn ee Lagu Sameeyay Goobaha Ganacsiga